ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ချစ်ပါလျှင် ~ Nge Naing
Wednesday, February 03, 2010 Nge Naing 16 comments
Posted in: ကဗျာ,ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း,မှတ်တမ်း
February 3, 2010 at 1:32 PM Reply
ဗိုလ်ချုပ် အတွက် ကဗျာလေး ဖတ်သွားတယ်... အရမ်းကောင်းတယ်...
February 3, 2010 at 1:47 PM Reply
အမရေ ကဗျာလေး ဖတ်သွားတယ် တကယ့်ကို ခုမှ ဖတ်ဖူးတယ် ကျနော်တို့ ငယ်တုန်းက မဖတ်ဖူးဘူးပဲ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ လေးစားဘွယ်ရာ စွမ်းရည်များအကြောင်း ရေးထားတဲ့ဒီကဗျာလေးကို ခုမှ ဖတ်ဖူးတယ် ။ ကျေးဇူးပါ မငယ်နိုင် ။
ခုခေတ် ဘိုဂျုပ်ကြီးတွေ အတွက် ရေးစပ်ထားတာများရော .. ရှိမလား နော်။
ဒီအပေါ်က ကဗျာလေးထဲက အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ပြီး ရေးလိ်ုက်ရင် တောင်၊
ပြည့်စုံ နိုင်ပါ့မလား ....း)
February 3, 2010 at 3:53 PM Reply
ဗိုလ်ချုပ်ပုံလေး ထည့်ဖို့ ဘယ်နားမှာ သွားယူရမလဲလို့ စဉ်းစာနေတုန်း ကိုဒီရေ လာထည့်သွားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တောင်ပေါ်သားနဲ့ Kiki မှ မဟုတ်ဘူး အိမ်က အမျိုးသားကလည်း ဒီကဗျာကို သူလည်း တခါမှ မကြားဖူးဘူးဆိုတော့ ကျွန်မတို့ မြို့နယ်က ဆရာ၊ ဆရာမ တဦးဦးကပဲ စပ်ထားလား ပြောမတတ်ဘူး။ ဒါမှမဟုတ် မမှတ်မိကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်တယ်။
February 3, 2010 at 5:59 PM Reply
ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားချစ်မြတ်နိုးပါတယ်... ကဗျာလေးဖတ်သွားတယ်
February 3, 2010 at 8:13 PM Reply
Gen Aung San is trulyavisionary who is way way ahead of his time. Burma has never recovered from his assassination along with brightest of minds in his cabinet.
February 3, 2010 at 10:50 PM Reply
February 4, 2010 at 8:38 AM Reply
ကဗျာဖတ်သွားပါတယ်။ အရင်က မဖတ်ဖူးပါ။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
February 4, 2010 at 9:46 AM Reply
That isagreat poem and it needs to spread to all Myanmar Schools !!!
Thanksalot for sharing. Really Appreciated....
February 4, 2010 at 5:59 PM Reply
ကဗျာလေးဖတ်ပြီး မှတ်သွားပါတယ် အစ်မရေ။ တင်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီကဗျာလေးရဲ့ အနှစ်သာရတွေကို လာရောက်မျှဝေ ခံစားသွားတဲ့ သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မက ”ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ” နဲ့ စတဲ့ အောင်ဆန်းဇာနည် ကဗျာလိုပဲ ဒီကဗျာကို လူတိုင်းသိတယ်ထင်နေတာ အခု တယောက်မှ မသိဘူးဆိုတော့ ကျွန်မတို့ ကျောင်းက ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မတို့ မြို့နယ်က ဆရာ၊ ဆရာမတယောက်ယောက်က စပ်ပြီး ကျောင်းသားတွေကို သင်ပေးတာပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ နေ့ကြီးရက်ကြီးနီးတိုင်း အဲဒီနေ့တွေအကြောင်း ပြာရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းက မပါရင် မပြီးဘူး ပြီးတာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို အားလုံးမွေးရမယ်ဆိုပြီး ဒီကဗျာလေးကို တိုင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အခုလို မျှဝေခွင့် ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ လာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးခဲ့သူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီလိုကဗျာမျိုးကို ဒီဘက်ခေတ်က ကလေးတွေ ဘာလို့ မဖတ်ရ မသင်ရတော့တာလဲ စဉ်းစားလို့မရဘူးနော်...
February 7, 2010 at 12:48 PM Reply
ကျေးဇူးပါ။ နှောင်းခေတ်ကလေးတွေအတွက်နဲ့ ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာ သုံးနိုင်ကြ အောင်လို့ မြန်မာကျောင်းဆရာများ ဘလော့မှာ ထပ်တင်ပါတယ်။
February 8, 2010 at 9:18 PM Reply
အစ်မငယ်ရေ ... ကြယ်ပြာတို့ငယ်ငယ်တို့က သင်ရတဲ့ကဗျာက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါဆိုတာနဲ့ စာသားတွေနဲ့စတဲ့ “အောင်ဆန်းဇာနည်” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးပဲသင်ဖူးတယ် ... အခု အစ်မတင်ပေးတဲ့ကဗျာလေးဖတ်ရတာ ကြက်သီးထလောက်အောင် သဘောကျမိပါတယ် ... မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
January 6, 2011 at 12:18 AM Reply
5 Jan 11, 17:12
Theint: မငယ်နိုင်..အမှတ်မမှားဘူး ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ချစ်ပါလျှင် ဆိုတဲ့ ကဗျာကလေးက ဆရာဦးတင်မိုး ရေးခဲ့တာပါ။ ထပ်ပြီး confirm လုပ်ပါမယ်နော်။ ဆရာဦးတင်မိုးရဲ့ ကလေးကဗျာများ စာအုပ်ထဲကပါ။